‘यौन उत्तेजना गराउने’ यार्सागुम्बाको यस्तो छ रामकहानी ! – NewsAgro.com
Main News उच्च मूल्य बस्तु जीवन शैली स्वास्थ्य
October 28, 2017 October 30, 2017 newsagro0Comments ‘यौन उत्तेजना गराउने’ यार्सागुम्बाको यस्तो छ रामकहानी !, यार्सागुम्बा, हिमाली
कामोत्तेजकदेखि स्मरण शक्तिवद्र्धक र शरीर दुखाईमा अचुक
यार्सागुम्बा हिमाली जिल्ला बझाङ, दार्चुला, लगायतका स्थानमा पाईने जडीबुटी हो, यो अमूल्य त हुन्छ नै , यो जडीबुटी हिमाली भेकका शेर्पा भोटेहरूसँग हुने र उनीहरूले प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । जसमा वनस्पति र जीव दुबै हुन्छ र यो कहिल्यै पनि मर्दैन । समद्र सतहदेखि ३८ सय मीटरदेखि ४८ सय मीटरसम्मको उचाइमा यो पाईने गर्दछ । त्यसैले यसलाई शेर्पाहरू ‘छातावु’ अर्थात छाता ओड्ने किरा भनेर चिन्ने पनी गरेका छन् ।
शेर्पा भाषामा यसलाई ‘यार्चा गुम्बु’ उपचारण गर्छन् । जसको अर्थ ‘यार्चा’ वनस्पति र ‘गुम्बु’ किरा हो । वनस्पति र किरासँगै भएको वस्तु यार्सागुम्बु भन्छन् । यस जडीबुटीको नाम दुईवटा शब्दहरूको संयोजनबाट बनेको हुन्छ ‘यार्सा’ र गुम्बा’ नेपाली प्रचलित भाषामा यसलाई यार्सागुम्बा भनिन्छ । नेपालका कतिपय स्थानहरूमा भने यसलाई जीवनबुटी र कसै कसैले त अश्लील नामले समेत चिन्ने गरेको पाइन्छ ।
← सावधान ! यस्ता ज्यानमारा खानेतेल प्रयोग गर्दैहुनुहुन्छ ?
कतारमा हारेका युवा कृषि कर्ममा रमे →
अलैँचीको भाउ एक दशकयताकै कम